Ilgaz wuxuu sugaa roobka barafka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia18 CankiriIlgaz sugaya barafka
13 / 01 / 2014 18 Cankiri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TELPHER
Ilgaz filaysaa Baraf: maqan sabab la'aanta ah ee barafka barafka xarumaha dalxiiska muhiim jiilaalka Ilgaz of Turkey.
Wakiilka xarunta xarunta Yıldıztepe Ski Orhan Ilgınlar, oo ah weriye AA, ayaa sheegay in baraf la'aan awgeed laba toddobaad awgeed, dalxiisayaashu aysan barafka karin, ayuu yiri.
Marka loo eego macluumaadka ay ka heleen saadaasha hawada, taasoo muujineysa inay filayaan roob baraf ah inta lagu jiro usbuuca, Ilgınlar wuxuu yiri, “Sanadkii hore waxay ahaan laheyd baraf aad u wanaagsan bartamahayaga laakiin sanadkaan nasiib xumo ma jiro baraf sidii aan dooneynay. Waxaan rajeynayaa inaan filayno inuu baraf dhacey dhowr maalmood. Sida xogta aan ku helnay, baraf yar ayaa ka jira xarumaha kale ee barafka. Marka 10 sintimitir ka badan baraf badan ka soo dhacdo aaggeenna, jidadkeenna ayaa usii gudbi doona heer la isticmaali karo. Dhumucda barafka ee barafka barafka wuxuu ahaa 10 bishii Janaayo ee sanadkan, 50 wuxuu ahaa santimitir isla waqtigaas sanadkii la soo dhaafay. ”
Isagoo difaacaya in Xarunta Yıldıztepe Ski Center ay tahay meesha ugu quruxda badan gobolka, ayuu yidhi Ilgınlar, ler Kuwa maalin walba yimaada xaruntayaga ayaa qaata gudoonka sare oo kor u kacaya oo daawanaya aragtida. Wadadkeenna cusub ee la furay waa dherer dhererkoodu yahay 2,5 kiiloomitir iyo ballac 50 oo ballac ah. Waa orodka barafka lagu ciyaaro. Waxaan sidoo kale leenahay bilow bilowga ah ee '4 kun' 500 mitir. Waxaan ka fileynaa qof walba inuu tago xarunta Yıldıztepe Ski Center oo aad ugu dhow Ankara iyo Istanbul İstanbul.
Barafka Dagaalka Ilgaz wuxuu gaariayaa santimitir 10
Goobta barafka ee Ilgaz Mountain Ski waxay gaartaa dhererka 45
Kaalmada Waxbarashada ee Yoldere University Jaamacada Izmir
Raadinta hudheelka Izmit oo la qabtay